Home » Adeega
About Dongmeng Machinery Makiinado
Adeegga Dongmeng Machinery
Dongmeng Machinery aadka u tixgeliyo tayada alaabooyinka iyo sumcad shirkadda. Sidaas awgeed, waxaan ku siin doonaa kaamil ah pre-iibinta iyo adeegga-sale ka dib markii macaamiisha xamaasad joogto ah. Waxaan la dhiso taxane ah oo geedi socodka adeegga ka qorshaynta, design, sahan site in la rakibo, daryeelka iyo dayactirka qalabka. Waxaan u furan tahay in ay bixiyaan alaabta fasalka koowaad iyo adeegga macaamiisha.
(1) Si aad u dooratid xal ku haboon macaamiisha.
(2) samaynta shaxda ugu fiican ee socodka.
(3) Design iyo soosaarka our qalabka sida ay shuruudaha gaarka ah ee xaaladda kala duwan.
(4) Ka dhig khabiir farsamo si loo soo dajiyo qalabka at fayl macmiilka.
(5) tababarka Field ee ka shaqeeya.
(6) Waa in geedka macdantu noo gaar ah.
adeeg Field Macdanta iyo Rock Processing
System Civil Iskujir Processing
System Processing wadar ahaan labada lug for Dhismaha Hydro-xidheenka
Warshadaha ee qodniinka- Slag iyo cayriin Waxyaabaha of Glass
Warshadaha ee madax adkaadeen Waxyaabaha.
Iyadoo in ka badan 20 sano oo design isku daro, National & amp; waayo-aragnimo caalamiga ah ee ore burburiyo & amp; baaritaanka, ku shiidi iyo labiska,. geedi socodka macdanta caalamiga ah, shiidi doona mashruuca, burburiyo warshad experience.We ku faanaa on isagoo furan, daacad ah oo dhexdhexaad ah hubinta inaad hesho mashiinada fiican iyo xal u ah mashruuca.
Waxaan leenahay shabakad ballaaran ee wariyeyaasha madaxa isku halleeyey ku takhasusay tiro balaadhan oo ah xirfadaha. Marka mashruuca u baahan tahay xirfado sida muuqan waxaan u maareeyaan iyo dhexgalaan ku takhasusay, kuwaas oo galay mashruuca, natiijooyin kaamil ah mar kasta.
Waxaan dhis iyo dhiiri geli Relationships Strong
macaamiisheena waa waxa ugu muhiimsan ee noo. Waxaan dhisaan isku-xirnaanta ganacsi on daacadnimo iyo hufnaan, hubinta in aan sano xiriirka naga soo dhaafay bilood. Si aad u talinaynaa soo jeedinta design ugu haboon, fadlan u ogolaan injineerada our inaad wax ka barato si aad shuruudaha farsamo iyo codsiga wax ku ool ah.
Inta badan oo ka mid ah booqashada macaamiisha ajnabiga ah waxay dareemaan xanibayo at markii ugu horeysay. Sababo la xiriira xaaladan, waxaan kaa caawin si aad u sameysato baabuurta, hotels, iyo turjumaanada for macaamiisha kasta oo booqanaya.